You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Anatomy / Hyperthyroidism ( Thyroid hormone များ နေ ခြင်း )
၉ ၀% သော hyperthyroidism ဟာ autoimmune diseaseကြာင့်
ဖြစ် ပါ တယ်။ Grave’s disease လိုု့ လဲ ခေါ် ပါ တယ်။
၁၀% က တော့ ရိုုးရိုုး ပဲ thyroid hormone များ လာ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
များ သော အား ဖြင့် Hyperthyroid condition ဟာ autoimmune disease ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် တစ် နည်း နဲ့ ပြော ရ ရင် တော့ အူ ကျန်းမာရေး မကောင်း လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ လိုု မျိုး အခြေ အနေ မှာ လည်း thyroid antibodies တွေ ထွက် တာ ပါ ပဲ။
Hypothyroid မှာ တွေ့ ရ တဲ့ antibodies တွေ က anti thyroid peroxidase antibodies နဲ့ thyroglobulin antibodies တိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
Hyperthyroid မှာ တွေ့ ရ တဲ့ ဟာ က တော့ TSH receptor antibodies ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ နေ ရာ မှာ အရေး ကြီး တဲ့ အချက် က တော့ ————
၁. thyroid hormone ထုုတ် တာ များ လိုု့ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ မရှိ မဖြစ် thyroid gland ကိုု အမျိုးမျိုး သော ခေတ်မီ ဆေး တွေ နဲ့ ဝိုုင်း ပြီး သုုတ် သင် လေ့ ရှိ ကြ တယ်။
ဆေး တွေ နဲ့ ဟော်မုုန်း တွေ မထွက် အောင် လိုုက် ပိတ် တာ က တစ် မျိုး ( methimazole, carbimazole PTU စ သည် ဖြင့် )
၂. ခွဲ စိတ် ပြီး thyroid gland ကိုု ထုုတ် ပြစ် တတ် ကြ တာ က တစ် မျိုး
၃. Radio active iodine နဲ့ လုုံးဝ ကိုု ဖျက် စီး ဖြစ် လိုုက် တတ် ကြ တာ က တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။
အမှန် ဆိုု ရင် thyroid gland က သူ့ ဖာသာ သူ ရောဂါ ကြီး ထ ဖြစ် တာ မဟုုတ် ပါ။
အောက် ပါ အကြောင်း တွေ ကြောင့် သာ အခုု လိုု အဖြစ် မျိုး ရောက် ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
၁. ဘဝ ရဲ့ ဖိအား ဒဏ် ကိုု ယောနိသော မနသိကာရ မထား နိုုင် ခြင်း ကြောင့် စိတ်ဖိစီး မှု များ နေ ခြင်း ( adrenal component )။
ဒါ ကြောင့် လဲ နှလုုံးခုုန် မြန် ခြင်း၊ စိတ်စောခြင်း၊ သွေး ပေါင် ချိန် တက် ခြင်း၊ အိပ် မ ပျော် ခြင်း စသည် တိုု့ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
၂. ကောင်း မွန်စွာ အစာ မချေ နိုုင် ခြင်း ( အူ ကျန်းမာရေး ချို့ တဲ့ ခြင်း ) Leaky gut
၃. ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ environmental toxins
၄. ရောဂါ ဖြစ် စေ တတ် သော ပိုုးမွှား များ pathogens အထူး သဖြင့် H Pylori infection
၅။ ဗီဇ genetic factors အချို့ မိသားစုု တွေ မှာ အဖြစ်များ တတ် ကြ ပါ တယ်။
Hyperthyroid ဖြစ် လာ ပြီ ဆိုု ရင် ဖြစ်ခါစ မှာ ရောဂါ လက္ခဏာ တွေ ကိုု ထိန်းသိမ်း နိုုင် ဖိုု့ အရေး ဓာတုု ဆေး ဝါး များ ကိုု သုုံး ဖိုု့ လိုု သော် လည်း၊ရေ ရှည်
အတွက် အခုု လိုု ဖြစ် လာ ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်း တွေ ကိုု သွား ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အကြောင်း ရင်း တွေ ကိုု မပြင် သမျှ ကာ လပတ်လုုံး ရေ ရှည် မှာ မအောင် မြင်
Thyroid gland ကိုု သေ အောင် သတ် မဲ့ အစား၊ သူ ဒီ လိုု အခြေ အနေ မျိုး ရောက် အောင် ဖန်တီး လိုုက် တဲ့အ ကြောင်း တွေ ကိုု ပြန် ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Thyroid gland ဟာ ခန္ဓာကိုုယ် အတွက် အရေး အကြီး ဆုုံး ဖြစ် တာ မိုု့ ၊ သူ့ ကိုု သေ အောင် သတ် ခြင်း ( radioactive iodine ဖြင့် ကုုသခြင်း )၊ ခွဲ စိတ် ပြီး အကုုန် လုုံး ထုုတ် ပြစ် ခြင်း ကိုု မလုုပ် သင့် ဖူး လိုု့ ထင် ပါ တယ်။
သူ မရှိ တော့ ရင် ၊ ဆေး ပြန် သောက် ပေ မဲ့ လည်း၊ မထိရောက် ရင် သော် လည်းကောင်း၊ မ သောက် ရင် သော် လည်း ကောင်း၊ ပေး တဲ့ ဆေး အချိန် အဆ
မမှန် ရင် သော် လည်း ကောင်း ဘဝအရည် အသွေး တွေ ကျ ဆင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ ရောဂါ မျိုးစုုံ လည်း ဝင် လာ နိုုင် ပါ တယ်။
Hyperthyroid condition ကိုု ကုု ရင်း နဲ့ ပဲ ဒီလူနာ တွေ ဟာ နောက်ဆုုံး
မ တော့ Hypothyroid တွေ ဖြစ် ကုုန် ကြ တယ် ဆိုု တာ မ မေ့ လိုုက် ကြ
စေ ချင် ပါ။
Thyroid gland ဟာ အကြောင်း တစ်ခုုခုု ချို့ ယွင်း သွား လိုု့ ဟော်မုုန်းတွေ များများ ထုုတ် တာ ကိုု သူ့ ကိုု ပျက်စီးသွား ရ အောင် လိုုက် ဖျက်စီး ကြ တာ ကြောင့် နောက် ဆုုံး မ တော့ သူ က လဲ လက် မြှောက် သွား ပြီး ဟော်မုုန်း တွေ ခန္ဓာကိုုယ် လိုု အပ် သ လောက် မထွက် နိုုင် တော့ ပါ။
ဒီနေရာ မှာ သင်ခန်းစာလေး ယူ စေ ချင် တာ က တော့ ———
Radioactive iodine ကိုု first line of treatment အနေ နဲ့ မသုုံး စေ ချင် ပါ။
ခွဲစိတ် ပြီး thyroid gland ကိုု ထုုတ် ပြစ် ခြင်း လဲ မလုုပ် စေ ချင် ပါ။ ( မတန်တဆ ကြီး နေ ပြီး လေရှူ ကြောင်း၊ အစာမျို လမ်း ကြောင်း တွေ ပိ နေ ရင် တော့ လဲ ခွဲ သင့် ရင် ခွဲ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် )။ ဒါ ပေမဲ့ အကုုန် လုုံး
ထုုတ် ပြစ် စရာ မ လိုု ပါ။
ဆေး နဲ့ အရင် ထိန်း ကြည့် ပြီး ၊ အကြောင်း ရင်း တွေ ကိုု သွား ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ မှ လဲ ဆေးကုုသ ရာ မှာ အောင် မြင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အဓိက တေဇောဓာတ် မရှိ တော့ ဖူး ဆိုု ရင် ဓာတ်ကြီး ၄ ပါး ထဲ က တစ်ပါး
ချို့ ယွင်း သွားပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
ရုုပ်တွေ ဖြစ်ကြောင်း များ ဖြစ် ကြ တဲ့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတုု၊ အာဟာရ မှာ လည်း ဥတုု
ချို့ ယွင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
ပဋိသန္ဓေ ဇနကကံကြာင့် အသက် ရှည် နိုုင် ပေ မဲ့ လိုု့ ၊ ဥတုု ချို့ ယွင်း သွား ရင် ဘဝ အရည် အသွေး တွေ ကျဆင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိတ်ဆွေ များ အား လုုံး ဓာတ် ကြီး လေးပါး ညီမျှ နေ အောင် နေ တတ် ကြ ပါ စေ။
အကြောင်း အကျိုး တွေ ကိုု လဲ ဆက်စပ် တတ် သူ များ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။
Second opinion, third opinion ယူ ရ မှာ လည်း ဝန် မလေး ကြ ပါ စေ နဲ့ လိုု့ ဆုု တောင်း ပေး